शरीरको विभिन्न भागमा दागहरू विभिन्न रोगहरूको संकेत गर्दछ। – Noor Health Life
शरीरको विभिन्न भागमा दागहरू विभिन्न रोगहरूको संकेत गर्दछ।
हाम्रो शरीरमा पिम्पल आउनु स्वभाविक हो तर कुनै खास भागमा बढी देखिन थाल्यो भने यसले रोगको संकेत गर्छ ।
यदि यो भागमा पिम्पल देखा पर्यो भने, यो एड्रेनल ग्रंथिहरु लाई क्षति को संकेत हो।
अत्यधिक कामको दबाब र तनावले पनि शरीरको यस भागमा दागहरू निम्त्याउन सक्छ।यो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणालीको पनि संकेत हो त्यसैले चिन्ता नगर्नुहोस् र शान्त रहनुहोस्।
नूर हेल्थ जिंदगीले नूर हेल्थ जिन्दगीको साथ तपाई र महान डाक्टरहरूबाट उत्कृष्ट प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। सर्जन परामर्शदाता। प्राध्यापकहरू। काम गर्ने नूर हेल्थ लाइफले गरिबहरूलाई मद्दत गर्छ र हामी तपाईंलाई यो काममा भाग लिनुहोस् र नूर हेल्थ लाइफलाई समर्थन गर्न अनुरोध गर्दछौं। थप पढ्नुहोस्।
यदि छातीमा दाग देखा पर्यो भने, यसको मतलब तपाईको पाचन प्रणालीले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन र तपाईले आफ्नो आहार परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।
दानाको कारण भिटामिनको कमी हो।यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले भिटामिन सप्लिमेन्टहरू लिन थाल्नुपर्छ तर आहारको माध्यमबाट त्यसको कमीलाई पूर्ति गर्नुपर्छ।
यसको कारण शरीरमा चिनीको मात्रा बढ्नु हो, त्यसैले धेरै चिनी र रोटी प्रयोग नगर्नुहोस्, तर तरकारी र फलफूलमा सन्तुष्ट हुनुहोस्।
खुट्टाको माथि र धड़को तल
यदि तपाइँ तपाइँको छालालाई नमिल्ने साबुन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो क्षेत्रमा दाग देखा पर्दछ, त्यसैले तपाइँको साबुन जाँच गर्नुहोस्। यसको अर्को कारण छाला संक्रमण हुन सक्छ।
कम्मरको माथिल्लो र बीचको भाग
यदि तपाईंलाई पर्याप्त निद्रा छैन भने यो ठाउँमा पिम्पल देखिन्छ, त्यसैगरी तपाईंले क्यालोरी युक्त खानेकुराहरू सेवन गर्दै हुनुहुन्छ।
दाग लाग्नुको कारण पनि पाचन समस्या हो।यसले तपाईले राम्रो आहार नखाइरहेको पनि संकेत गर्दछ। pimples को कारण र उपचार।
हाम्रो अनुहारमा किन पिम्पल हुन्छ प्रायः हामीलाई थाहा हुँदैन।दाँत बन्नुको कुनै खास कारण छैन तर यसका धेरै कारणहरू हुन सक्छन्।केही कारण र तिनको उपचार यस प्रकार छन्।आउनुहोस् तिनीहरुको बारेमा कुरा गरौं। केहि विवरण।
सन्तुलित आहारको अभाव र शुद्ध कार्बोहाइड्रेटको उच्च सेवनले जुनसुकै उमेरमा मुँहासे निम्त्याउन सक्छ। सन्तुलित आहार र कम ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भएको आहार आवश्यक छ। अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन् कि रगतमा इन्सुलिनको उच्च स्तरले अधिक तेल उत्पादन गर्न सक्छ। र इन्फ्लेमेटरी फोलिकल्स। तपाईं पनि आफ्नो आहार स्वस्थ र सन्तुलित बनाउन सक्नुहुन्छ।
आजकल अनुहारबाट पिम्पल हटाउन ब्लू लाइट थेरापी भनिने आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ। यी शक्तिशाली निलो किरणहरूले फोलिकल्सबाट छालामा प्रवेश गरी ब्याक्टेरियालाई मार्छन्। यसले छालामा रातोपन निम्त्याउन सक्छ तर यो अस्थायी हो, त्यसैले यदि तपाईंको बजेटले अनुमति दिन्छ भने , यो थेरापी मुँहासे छुटकारा पाउन र सफा छाला प्राप्त गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो छ।
बेन्जोयल पेरोक्साइडको तुलनामा एक धेरै लोकप्रिय र हल्का चिया रूखको तेल सबै उमेरका सबै प्रकारका मुँहासेको उपचारको लागि उपयोगी छ। चियाको रूखको तेलमा प्राकृतिक एन्टिसेप्टिक गुणहरू छन् जसले बन्द छिद्रहरू र छाला सफा गर्छ। यसले सतहमा अतिरिक्त तेल निस्कनबाट पनि रोक्छ, र प्राकृतिक रूपमा छालाको सूजन कम गर्दछ।यो तेल धेरै लोशन, अनुहार धुने र साबुन मा पनि प्रयोग गरिन्छ।
छाला विशेषज्ञ र स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार आफ्नो खानामा नुनको मात्रा कम गर्नुहोस्।नूर हेल्थ लाइफका अनुसार मुँहासेको प्रमुख कारण सोडियमको मात्रा बढी हुनु पनि हो।बाहिर खाँदा विशेष ध्यान दिनुहोस्।खानामा नुनको मात्रा कम गर्नु राम्रो हुनेछ। 1500 मिलीग्राम सोडियम दैनिक।
तनावले हर्मोनको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर गर्छ।तनावले छालामा प्रत्यक्ष असर गर्दैन तर जब तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ, छालामा पिम्पल देखिन्छन्।यसले शरीरमा तेल निस्कने ग्रन्थीहरूलाई पनि असर गर्छ।ध्यान,व्यायाम वा अन्य कुनै तपाईको मानसिक अवस्थालाई शान्त पार्ने तनाव कम गर्नको लागि विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
राम्रो नतिजाको लागि, तपाईंको आहार र जीवनशैलीमा उपयुक्त परिवर्तनहरू सहित राम्रो छाला विशेषज्ञसँग परामर्श लिनु महत्त्वपूर्ण छ। छालामा देखा पर्ने रोगहरू।
केही रोगहरूको पहिलो लक्षण छालामा देखा पर्दछ।
छाला मानव शरीरको सबैभन्दा ठूलो अंग हो तर के तपाईंलाई थाहा छ कि यसले रोगहरूको पनि भविष्यवाणी गर्छ?
हो, केही रोगहरूको पहिलो लक्षण छालामा देखा पर्दछ।
तर के तपाई छालाले विभिन्न रोगका लक्षण देखाउनुहुन्छ भन्ने थाहा छ ?
बर्साइटिस माछा खाएपछि दूध पिउनाले हुने प्रतिक्रिया हो भन्ने विश्वास गरिन्छ, तर चिकित्सा विज्ञानले यसलाई अस्वीकार गर्दछ।वास्तवमा छालामा यसको प्राकृतिक सम्पर्कमा आउँदा पिग्मेन्ट कोशिकाले विशिष्ट पिग्मेन्टयुक्त पदार्थ उत्पादन गर्न बन्द गर्छ। देखिने सेतो दागहरू देखिने छालामा हुनु वास्तवमा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा छाला कोशिकाहरूमा आक्रमण हो, जो छालालाई रंग दिने पिग्मेन्ट मेलानिनमा हुन्छ। यो थाइरोइड रोग जस्ता स्वत: प्रतिरक्षा रोगहरूको संकेत पनि हुन सक्छ।
छाला को सूजन
छालामा सुख्खा, चिलाउने र रातो दागहरू सामान्यतया घाँटी वा कुहिनो नजिक देखिन्छन्। यो एक धेरै सामान्य छाला रोग हो जसले बच्चा र वयस्क दुवैलाई असर गर्न सक्छ, तर यो मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको संकेत पनि हुन सक्छ। एक अमेरिकी अध्ययनका अनुसार डिप्रेसन वा तनाव भएका मानिसहरूलाई चाँडै यो रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ, तर डर्मेटाइटिसको उपचारले मानसिक स्वास्थ्यमा पनि सुधार गर्छ।
लामो समयसम्म उच्च रक्त शर्कराले रक्त परिसंचरणलाई असर गर्न सक्छ र स्नायुहरूलाई क्षति पुर्याउन सक्छ, शरीरको घाउ निको पार्ने क्षमतालाई असर गर्छ, विशेष गरी खुट्टामा, जसले मधुमेह निम्त्याउन सक्छ। यसलाई फिस्टुला पनि भनिन्छ।
यो छालाको रोगमा छालामा बोक्रा देखिने र चिलाउने र चिलाउने, तर यसले केही गम्भीर चिकित्सा समस्याहरूलाई पनि औंल्याउँछ। चिकित्सा विज्ञहरूका अनुसार यो अवस्था भएका व्यक्तिहरूमा हृदयाघातको जोखिम ५८ प्रतिशत र स्ट्रोकको जोखिम ४३ प्रतिशत बढी हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार सोरायसिस र धमनीमा रगत जम्नुको कारण सूजन हुन्छ र यो कुराले यी दुईलाई जोड्छ।
गुलाबी अनाज वा वर्दी
यो रोगले छालामा रातो र गुलाबी दाग ​​देखा पर्न जान्छ, धेरैजसो मानिसले यसलाई हानिकारक नठान्दा यसको उपचार गर्दैनन्, तर नयाँ अध्ययनले यो अवस्थाले महिलामा डिमेन्सियाको जोखिम २८ प्रतिशतले बढाएको देखाएको छ। उमेर 50 वा 60 वर्ष भन्दा माथि छ।
सुख्खा र फुटेको छाला भएको खुट्टा
यो थाइरोइड ग्रन्थी (विशेष गरी वाइन्डपाइप नजिकका ग्रंथिहरु) को समस्या को संकेत हुन सक्छ, विशेष गरी जब यो खुट्टा मा नमी को ख्याल गर्न को लागी बेकार छ। थाइरोइड ग्रन्थीमा समस्या हुँदा मेटाबोलिक दर, रक्तचाप, मांसपेशीको विकास र स्नायु प्रणालीमा काम गर्ने थाइरोइड हर्मोन उत्पादन गर्न असमर्थ हुन्छ। एक चिकित्सा अध्ययनका अनुसार थाई राइडको समस्याका कारण छाला अत्यन्तै सुख्खा हुन्छ, विशेषगरी खुट्टाको छाला फुट्न थाल्छ र यो अवस्थामा सुधार नआएमा चिकित्सकलाई देखाउनु मात्रै फाइदाजनक हुन्छ ।
हातमा अत्याधिक पसिना आउनुले थाइरोइड रोग निम्त्याउन सक्छ र साथै अत्याधिक पसिना आउन सक्छ, जसमा पसिना ग्रन्थीहरू बढी सक्रिय हुन्छन्। धेरैजसो मानिसहरूले शरीरको एक वा दुई भागहरू जस्तै कांख, हत्केला वा खुट्टामा यो समस्या अनुभव गर्छन्। डाक्टरहरूले यसलाई जाँच गरेर उपचार लेख्न सक्छन्।
कालो गाँठो वा तिल
सामान्यतया, धेरै प्रमुख कालो तिल वा बम्पहरू छालाको क्यान्सरको संकेत हुन सक्छ, जबकि तिनीहरूले स्तन क्यान्सर, मूत्राशय र मृगौला क्यान्सरको जोखिम पनि बढाउँछन्। यस्ता घातक क्यान्सरबाट बच्न घाममा कम हिँड्ने, सक्रिय रहने, स्वस्थ खाना र मदिराबाट टाढा रहने विज्ञहरूका अनुसार थप प्रश्न र उत्तरका लागि नूर हेल्थ लाइफलाई इमेल र क्यानमा सम्पर्क गर्नुहोस्। noormedlife@gmail.com